Sida loo yareeyo Lacag bixinta Amaahda Ardayga 2022
Sida loo yareeyo Lacag bixinta Amaahda Ardayga
Barashada sida loo dhimo lacagaha deynta ardayga waxay noqon kartaa naf-badbaadiye haddii aad ku dhibtoonayso inaad iska bixiso biilashaada. Nasiib wanaag, uma baahnid inaad ku dhegganaato lacagaha cirka-sare ee bil kasta. Halkan waxaa ah xeelado lagu dhimayo lacagaha deynta ardayga ama xitaa bixi deyntaada goor hore.
Aasaaska Hoos u dhigida Lacag bixinta Amaahda Ardaygaaga
Talaabada ugu horeysa ee hoos u dhigista deynta ardaygu waa in la xisaabiyo kharashkaaga. Samee a miisaaniyadda oo lasoco kharashaadkaaga, kadibna eeg inta aad kaydsan karto bil kasta.
Haddii aadan awoodin inaad wax badbaadiso, ku billow inaad yareyso waxyaabaha muhiimka ah.
Marka xigta, bilow inaad lacag badan ku sameyso dhaqdhaqaaqyada dhinac ama aad ku weydiisato kor u qaadida shaqadaada caadiga ah. Xitaa haddii ay tahay kaliya $50 dheeraad ah bishii, waxay sameyn kartaa farqi weyn waqti ka dib.
Ugu dambeyntii, ka fiirso dib-u-maalgelinta deyntaada qaar ka mid ah shirkadahan bixiya kuwa hoose dib-u-maalgelinta deynta ardayga heerka dulsaarka Marka loo eego bangiyada dhaqameedku sameeyaan, laakiin hubi inay yihiin kuwo sumcad leh.
Waa maxay Xeeladaha Qaar ee lagu Yaraynayo Lacag-bixinta Amaahda Ardaygaaga?
Iska Bixi Dulsaarka
Hal istaraatiijiyad lagu dhimayo lacagaha deynta ardayga waa inaad diirada saarto bixinta dulsaarka deyntaada marka hore. Markaad tan sameyso, waxaad awoodi doontaa inaad dhimo qaddarka maamulaha ee is beddelaya gacmaha bil kasta adigoo weli bixinaya wixii lagugu leeyahay. Waxa kale oo ay ku siin doontaa dabacsanaan badan si aad u bixiso baaqyada hadhay ee deyntaada, taas oo mararka qaarkood kaa caawin karta yaraynta culaysyada maaliyadeed.
Wax badan ka shaqaynaya
Istaraatiijiyad labaad oo laga yaabo inay ku caawiso inay shaqeyso saacado badan ama helitaanka shaqo ka wanaagsan oo leh mushahar sare si aad lacag badan u samayso ujeedooyin lacag bixin ah.
U fiirso Qorshaha Bixinta Amaahda Ardaygaaga
Iyada oo deynta amaahda ardaydu ay sii kordheyso marka qiimaha kulliyadda uu kordho, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii aad dib uga fikiri lahayd xeeladdaada. Waxaa jira siyaabo badan oo aad si degdeg ah ugu bixin karto deynta ardaygaaga.
Halkan waxaa ah dhowr ikhtiyaar oo kaa caawin kara:
1. Isku dar deymahaaga.
2. U samee lacag-bixino ku salaysan laba toddobaadba mar.
3. Ogow dulsaarka deymahaaga.
4. Ka raadso kaalmo dhaqaale dawladda ama kulliyadaha.
Ma jiraan Ikhtiyaar kale oo ka baxsan Bixinta Amaahda Ardayga?
Waxaa jira xulashooyin badan oo ardayda qalin jebisay ay tixgeliyaan, laakiin tan ugu caansan waa dib u bixinta deynta ardayga. Waxay ku lug leedahay qaadashada mushaharka iyo bixinta deynta deynta ardayga. Waxay noqon kartaa mid culus sababtoo ah dadka waxaa laga yaabaa inaysan haysan lacag dheeraad ah oo ka hartay dhammaadka bisha si ay u daboosho kharashyada kale.
In kasta oo doorashadani aanay u xumaan sida dadka qaarkii u malaynayaan, ardayda ka qalin jabisa amaahda dawladda dhexe waa in ay tixgeliyaan doorashooyin kale. Hal ikhtiyaar ayaa ah in dib loogu maalgeliyo deyn bixiye gaar ah si ay u helaan dulsaar hoose oo ay u badbaadiyaan lacagaha bishii.
Dariiqa kale ee qalin-jabiyayaashu ay dib u bixin karaan amaahdooda waa iyada oo loo marayo qorshe dib-u-bixineed oo dakhli ku salaysan, kaas oo ku salaysan lacag-bixintaada billaha ah dakhligaaga halkii aad ka ahaan lahayd wadarta guud ee hadhaaga aad ka amaahatay dhammaan deymaha ardayda federaalka.
Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Loo Badbaadiyo Dulsaarka Amaahda Ardaygaaga
Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee aad lacagta ugu kaydsan karto dulsaarka amaahda ardaygaaga waa inaad iska diiwaan geliso qorshaha dib-u-bixinta daqliga.
Si ka duwan qorshayaasha dib-u-bixinta caadiga ah, qorshayaasha dakhli-hoosaadka ayaa dhigaya lacag-bixinta sida boqolkiiba dakhligaaga ku-talogalka ah. Lacag-bixinuhu waa xadidan yihiin, waxaanad bixin doontaa wax ka yar bishii. Intaa waxaa dheer, inta badan barnaamijyada, wixii baaqi ah ee hadhay waa la cafiyi doonaa ka dib labaatan ama labaatan iyo shan sano.
Haddii aad leedahay deyn dhaqameed, tani waxay la macno tahay in aad bixin doonto wax ka badan inta aad nooshahay deynta sababtoo ah bilo yar ayaa daboolaya cafiska. Laakin haddii aad leedahay taariikh shaqo oo hoose ama dhexe oo leh dheelitirka deynta ardayga ee sare, tani waxay noqon kartaa habka ugu wanaagsan ee lagu badbaadiyo lacagta dulsaarka. Waa lagama maarmaan in la fahmo sida loo sameeyo bixinta amaahda ardayga hoose ka hor inta aadan qaadan wax deyn ah.
Previous Post:Cannabisku ma kaa caawin karaa inaad si fiican wax u barato?
Post Next:Liiska Dugsiyada Ivy League ee leh Kharashkooda Hadda